Semalt SEO सुझाव फर्म मार्केटिंग को लागी
हालसालै, वकिलहरूले अनलाइन मार्केटिंगसँग सम्बन्धित धेरै अवरोधहरूको सामना गरिरहेका छन् अर्थात् बढ्दो प्रतिस्पर्धा र ग्राहकहरूको व्यवहार परिवर्तन गर्न। नतिजाको रूपमा, खोज इञ्जिन अप्टिमाइजेसन धेरै फर्महरूको लागि प्राथमिकतामा भएको छ।
एसईओ एक अभ्यास हो जुन दुबै साइटको साइट र अफ-साइट तत्त्वहरूलाई कन्फिगर गर्ने समावेश गर्दछ जुन सर्च ईन्जिनले श्रेणीकरणमा विचार गर्दछ। धेरै एसईओ टेक्निकहरू विभिन्न उद्योगहरूमा लागू हुन्छन्, तर कानुनी उद्योगमा तपाईंको फर्मलाई बढावा दिन सफल हुन तिनीहरू पनी तोकिनु पर्छ। यस उद्योगमा मार्केटिंग फरक पर्दछ, राज्य बार संघहरू द्वारा नियम र नियमहरू लगाइए बमोजिम।
ज्याक मिलर, Semalt डिजिटल सेवा का ग्राहक सफलता प्रबन्धक मुख्य सुविधाहरु हाइलाइट गर्दछ जुन तपाईले विचार गर्नु पर्छ जब कानुनी फर्मको लागि SEO रणनीति विस्तारित गर्ने बारे।
१. किवर्ड रिसर्च
वेबसाइटलाई अनुकूलन गर्ने पहिलो चरण भनेको कुञ्जी शब्द अनुसन्धान हो। एक वकिलले खोजशब्दहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्न सक्दछ जुन स indicate्केत गर्दछ कि खोजकर्ता कानूनी सेवाहरूको लागि साइन अप गर्न चाहन्छ। यी कुञ्जी शब्दहरूको एक सभ्य भोल्यूम हुनुपर्दछ यो सुनिश्चित गर्नका लागि खोज इन्जिनले यसलाई ट्राफिक निर्देशित गर्दछ। यस प्रविधीको कुञ्जीले पत्ता लगाउँदैछ कि सम्भावित ग्राहकहरूले खोजी पट्टीमा के टाइप गर्न सक्दछन्।
२. कार्यमा अटर्नी-विशिष्ट कल
अर्को प्रविधि जसले यसको दक्षता प्रमाणित गर्‍यो कार्यको लागि विशेष कल हो। यो आगन्तुकलाई एक कार्य गर्न बाध्य पार्न डिजाइन गरिएको हो। Hovewer, कार्य गर्न कल सिर्जना गर्न केहि प्रयासहरू र रणनीति को आवश्यक हुन्छ जुन बन्द हुनेछ। CTA हरूले यो सुनिश्चित गर्नु पर्दछ कि खोजकर्ताले सजिलैसँग धेरै जानकारीको माध्यमबाट स्क्रोल नगरी सन्देश देख्न सक्दछ। उनीहरूले यो कललाई वेबसाइटको प्रत्येक पृष्ठमा कार्यको लागि सबैभन्दा देखिने क्षेत्रमा राख्नुपर्दछ, उदाहरणका लागि वेबसाइटको हेडर।
Attorney. अधिवक्ता योजना
यसले सामान्यतया HTML कोडलाई जनाउँछ जुन प्राय: खोजी ईन्जिनलाई सामग्रीको विभिन्न टुक्राहरूको बिचको सम्बन्ध बुझ्नको लागि मद्दत पुर्‍याइएको छ। कानूनी उद्योगको आफ्नै स्किमा छ जसले खोज ईन्जिनलाई सामग्रीको प्रकार थाहा पाउन दिन्छ जुन कुनै कानुनी विशेषज्ञ वा कानून फर्मसँग सम्बन्धित छ। स्किमाको साथ तपाईंको सामग्री मार्क गर्नाले खोजी ईन्जिन नतीजाहरूमा क्लिक-थ्रू दर सुधार गर्न मद्दत गर्दछ।
Legal. कानूनी सामग्री छाता
गुगल क्रल र अनुक्रमित अनलाइन सामग्री एक व्यवस्थित र संगत तरीकामा। यसैले, प्रत्येक अभ्यास क्षेत्रको लागि एक पृष्ठ पाउनको लागि र यी सबै अभ्यासहरू तार्किक ढ sum्गमा मिलाउन आफ्नो वेबसाइट व्यवस्थित गर्न राम्रो छ। वेबसाइटमा सान्दर्भिक सामग्री खोज्ने बोझलाई हटाउनेछ।
लिंक भवन एक अर्को कारक हो जसले खोज इञ्जिनमा परिणामहरूमा पृष्ठ रैंकिंगलाई ठूलो प्रभाव पार्दछ। यद्यपि सबै लिंकहरू समान छैनन्। त्यसकारण, एक वकिलले प्रासंगिक रूपमा प्रासंगिक रूपमा उच्च-गुणवत्ता स्रोतहरूबाट लि acquire्क लिन आवश्यक छ। तपाईंको वेबसाईटमा उच्च गुण लि links्कहरूको अधिक संख्यामा पोइन्टहरू, राम्रो खोज ईन्जिनमा यो क्रमबद्ध हुनेछ।
यस दिन र उमेर मा, एक साइट अनलाइन बनाउने वकीलहरु को लागी वैकल्पिक छैन। प्रत्येक दिन, अधिक र अधिक ग्राहकहरु अनलाइन प्लेटफर्महरु को लागी कानूनी सेवाहरु को बारे मा जानकारी खोज्न को लागी मोड़ छन्। Semalt ग्राहकहरूले प्रमाणित गरिसकेका छन कि विस्तृत SEO योजना महत्त्वपूर्ण छ यदि तपाइँ खोजी ईन्जिन नतीजाहरूको पहिलो पृष्ठमा देखाउन चाहानुहुन्छ भने।